vondrona parlemantera GPR na Solombavambahoaka mahaleotena eo anivon’ny Antenimieram-pirenena. Iaraha-mahita fa midina amin’ny antsasaky ny vidiny tena izy teo aloha ny iraisam-pirenena, hoy izy ireo. Andrasana araka izany raha mba hijery izany ny fanjakana na tsia. Raha tsiahivina rahateo, dia herintaona lasa satria ny volana jona 2019 no nampidinina 100Ar teo ny vidin-tsolika, izay tena nanaovana serasera be. Ankoatra izay moa, dia mangataka fisaraham-pahefana feno misy eo amin’ny fahefana mpanatanteraka, mpanao lalàna, fahefana ara-pitsarana ireo vondrona depiote ireo. Ny fifampitsabahana amin’ireny no matetika miteraka olana amin’ny fanatanterahana ny asa, ary indraindray hararaotin’ny mpanao politika, ka ny solontenam-panjakana na teknisianina ataon’ny sasany fitaovana, hoy ny GPR.